गायनमा सक्रिय बन्दै गायिका नित्याशिवा | Nepalisongskhabar.com
वसन्त सापकोटाको संगीतमा ‘तिम्रै नाम होस’ सार्वजनिक ( भिडियो )
नविनको ‘हाम्रो सम्बन्ध’मा सजिना र विप्लपको रोमान्स ( भिडियो )
मुनालशिशिरको निर्देशनमा ‘मायाको मौसम’ सार्वजनिक ( भिडियो )
सुरक्षाको स्वर, टिका दाहालको संगीतमा ‘कौवा करायो’ सार्वजनिक ( भिडियो )
देवराज आले मगरको ‘फेरि भेटौंला’ सार्वजनिक (भिडियो)
गायनमा सक्रिय बन्दै गायिका नित्याशिवा
सुनसरीको प्रकाशपुर जन्मथलो भएपनि कर्मथलो काठमान्डाँैलाई बनाएर नेपाली सांगीतक आकाशमा राम्रो सम्भावना भएकी गायिका हुन नित्याशिवा । आफ्नो पहिलो एल्बम चाहना मनको गीतबाट नेपाली संगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी उनले हाल सम्म चलचित्र तथा पार्श गायनको क्षेत्रमा बर्चस्व राख्न सफल भएकी छन । उनले बिधवा ,रथ,गोरे,दिलदार, कन्फ्युज,मदहोस आरोप र इ कैसन बौछा र भोजपुरी मुभी मा आवाज दि सकेकी छन भने थुप्रै भोजपुरी गीत र नेपाली गीत हरु गाएकी छन हालै तिमी ट्याटु खोपन बाट आम दर्शक तथा स्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल भएकी छन । तिनै गायिका नित्याशिवा सगँ सहकर्मी साथी रोशन पोखरेल ले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश ।
तपाईको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो ?
मेरो बाल्य काल सुनसरीको प्रकाश पुरमा सामान्य परिवारमा बित्यो खास गरी मेरो प्राबि तहको अध्ययन गाउँमै भयो । त्यसपछि हाईस्कूल तह भने शहरमा गरियो अनि कलेज पनि त्यही शुरु गरे ।
साँगितिक क्षेत्रमा कसरी प्रवेश कसरी भयो ?
म यो क्षेत्रमा सानैदेखि लागेकी हुँ जति बेला म ५÷६ कक्षामा पढ्थे होला त्यस बेला म टेबल ठटाएर गीत गाउँथे । पछि काठमान्डौँ आएपनि संगीत प्रतिको मोहले तान्यो र संगीतको क्लास गर्न लागे । जसको केही समय पछि मैले “चाहना ” बोलको गीत बजारमा ल्याए । पहिलो एल्बम भएर होला खासै गीतले सफलता दिएन । त्यसपछि मैले विधवा गीतमा आफनो आवाज दिए । जुन गीतलाई धेरैले मन पराउनुभयो । जसको सफलताबाट आज सम्मपनि संगीतको क्षेत्रमा रहेकी छु ।
संगीतिक क्ष्ेत्रको व्यवसायिक अवस्था कस्तो छ ?
अहिले व्यवसायिक दृष्टिले नेपाली गीत संगीतको अवस्था नाजुक छ बिक्री बितरण छैन सिडीहरु जादैन क्यासेटहरु बन्द भइ सक्यो पिआरबिटी र सिआरबिटीको पैसा कतिको आउला र यूट्यूबमा हालेको गीतको पैसा कहाँ जान्छ हाम्रो खास स्रोत भनेको केवल स्टेज कार्यक्रम मात्र हो । त्यसमा पनि कहिले यस्तै सहयोगको कुरा आउँछ । खास गरी साथी भाइले बिदेश तिर कार्यक्रमहरु गर्छन हाम्रो खास स्रोत भनेकै त्यही हो ब्यबसायीक हिसाबले अहिले निकै गाह्रो छ तर पनि गीत संगित बचाउन निरन्तर गाउने विचारमा छु ।
गीत संगितमा नलागेको भए नित्या शिवा लाई कहाँ भेटिन्थ्यो होला ?
यो क्षेत्रमा नलागेको भए सायद अन्य कुनै सामान्य मानिस सरहको जिवन ब्यक्तित गर्नुपर्यो होला । जुन आम नागरिक सरहको कुने थियो होला ।
यहाँलाई नित्या शिवा भनेर चिनाउने गीत कुन कुन हो ?
आफ्नो सिर्जना आफुलाई सबै नै प्यारो हुन्छन् तर पनि सम्झिनु पर्दा बिधवा ,रथ,गोरे,दिलदार, कन्फ्युज,मदहोस आरोप र इ कैसन बौछा र भोजपुरी चलचित्रमा समावेश भएका गीत जुन गीतको कारणले मलाई सागिँतीक फाँट अझ सफल सिर्जना ल्याउनको लागी प्रेरणा दियो ।
यस क्षेत्रमा स्थापित हुनका लागि यहाँले कतिको दुख र शंघर्ष गर्नु पर्यो ?
धेरै दुख गरेको छु यो यात्रामा महाभारत हुन्छ भन्नुपर्दा, म काठमाडौको बसाई आफना आफन्तबाट टाडा बसेर रहरको यात्रालाई सधर्षको मैदानबाट हेर्दा निकै अफटयारो भयो । कतिपय अवस्थामा आफनो चाहना अनुसारको गर्न नसक्दा पिडा र सफलतामा खुशी हुनु स्वाभाविक रहेछ ।
कलाकार त राष्ट्रको गहना भन्छन्क नि , कला क्षेत्रमा लागिसके पछी आफ्नै गाउँ ठाउँ र देशको लागि के गरे जस्तो लाग्छ ?
हामिले गीतसङीत बाट नेपाललाई चिनाउने हो नेपालको कला र सस्कृतिलाई बचाउनु हो , त्यो काम गरिरहेको छु र गरिरहने छु, मैलेपनि आफनो विभिन्न भाषा भाषिको गीतमा आफनो आवाज दिएर उहाँहरुको गीतलाई माथी पुयाउने काम गरेकी छु ।
यस क्षेत्रमा स्थापित हुनमा सबै भन्दा पहिला कसको नाम सम्झिनु हुन्छ ?
बाटो देखाउने गुरु अनि मेरो आमा , परिवारका सदस्य , मेरो आवाजलाई मन पराउने श्रोता दर्शकलाई सम्झिन्छु, ।
धन्यवाद हामीलाई समय दिनु भएकोमा ।
धन्यवाद रोशन जी , तपाईले मेरो जिन्दगीका तिता मिठा भोगाइहरु हजुर मार्फत धेरै शुभचिन्तक मेरा श्रोता तथा दर्शक माझ पुर्याउने अवसर दिनुभयो । त्यसका लागी तपाई हृदय देखी नै आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
Published date : 2018-12-19
तपाईको पौष महिना कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस मासिक राशिफल
राजेश पायल राइको स्वर र रुद्र पाहिम अभिनित ‘भगवान रहेछन पुर्खाहरु” भिडियो
बलात्कार घटाउने ज्योति मगरको उपाय : ‘मृत्युदण्ड होइन, लिंग काटिदिनुपर्छ’
कविराज शाहि र लक्ष्मण पोर्तेलको लोकदोहोरी गित“तिमी रुदाँ तिमै्र आशुँ बनि झर्ने छु ” भिडियो सहित
जनचेतना मुलक लोक गीत “कथा दलितको” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
बिशाल निरौलाको स्वरमा धुपा राईको आधुनिक गीत “नजर हट्दैन” बजारमा (भिडियो सहित)
युनेश लामा, रजनी लामा र उनिशा लामाको अभिनयमा “मायालाई सम्झेर” (भिडियो सहित)
रामजी थापा मगरको लय र बिमला भुजेलको शब्दमा “झोल्कै तालमा खोलियो” बजारमा (भिडियो सहित)
जे.बि ओलीको लय शब्दमा अजम्बरी प्रेमभावमा “मुना मदन” बजारमा (भिडियो सहित)
स्मृति गौतम र शंकर घिमिरेको सुमधुर स्वरमा “कालिको जोबन ढल्की जाला” (भिडियो सहित)
राष्ट्रिय लोक दोहोरी महोत्सवको उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन ‘पासाङ’ले उद्घाटन गर्ने
प्रबिशा अधिकारीको स्वरमा “दुरि मजबुरी” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
रामशरण आले, शम्भु नेपाल, भोजराज रखालको “जाले रुमाल” उकालो लाग्दै (भिडियो सहित)
NEPALI SONGSKHABAR .COM
For Adv :- 9808750580
सस्थापक / सल्लाहकार
दिलिप योञ्जन तामाङ ,हाल अमेरिका
Copyright © 2015-2022 Nepalisongskhabar.com